जन्मदिनमा अरुले उपहार दिन्छन्, तर साहित्यकार आम मान्छे भन्दा फरक हुने नै भए । कवि रोशनी गुरुङले आफ्नो जन्मदिनमा पाठकलाई उपहार दिएकी छन् । उनको पहिलो कृति स्वर्गको एक फन्को आइतबार पोखरामा लोकार्पण भएको छ । रोशनीका लागि यो धर्ती, कला, संस्कार, संस्कृति नै स्वर्ग हो । यही परिवेशलाई लयमा उनेर उनले कविता लेखिन् । पत्रकारितामा सक्रिय रोशनीले आइतबारबाट औपचारिक रुपमा कविको परिचय थपिन् । कृति मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर… पुरा पढौ
एकाइसौं लघुकथा वाचन
लघुकथा प्रतिष्ठान पोखराको नियमित लघुकथा वाचन एकाइसौं शृंखला सम्पन्न भएको छ । विष्णु अल्पविरामको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा लघुकथाकार लक्ष्मण थापा, विष्णु बास्तोला, गीता तिवारी, जनार्दन दाहाल, वेणु खतिवडा, कल्याण पन्त, अल्पविराम, भाष्कर लगायतले वाचन गरेका थिए । त्यस अवसरमा पोखरा बाहिरका लघुकथाकार खेमराज पोखरेल (नारी दिवस), राजु क्षेत्री अपुरो (चोरी),कृष्ण बजगाइँ (योग्यता) र गंगा आचार्य (घटना) का कथा समेत वाचन गरिएको थियो । सो प्रतिष्ठानले आख्यान क्षेत्रमा लघुकथा… पुरा पढौ
कार्निभल’ लिएर आए भूमिराज
कथाकार डा. भूमिराज बस्ताकोटीको कथासंग्रह ‘कार्निभल’ शनिबारबाट बजारमा आएको छ । बिएन पुस्तक संसारले प्रकाशन गरेको कथा संग्रह साहित्यकार सरुभक्त तथा स्रष्टाकी छोरी प्रतिमाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरे । सरुभक्तले पोखरेली साहित्यमा कविताका सापेक्षमा आख्यानपछि परेका बेला बस्ताकोटीको कृतिले महŒव राख्ने बताए । उनले भने, ‘कसैको प्रत्यक्ष प्रभावमा नभएर स्रष्टाले आफ्नो बाटो आफैं तयार गर्नुपर्छ । भूमिराजले त्यो गरेको मैले पाएको छु ।’ पोखरामा आख्यान लेखनलाई अभिप्रेरित गर्ने संस्थागत प्रयास… पुरा पढौ
टुल्कीको विवाह तीस वर्षको उमेरसम्म भएको थिएन । अब भने टुल्की जो माग्न आए पनि राजी हुने निधो गरेकी थिइन् । नभन्दै उनलाई केही टाढाबाट माग्न आए । बावुआमाको पनि चित्त बुझ्यो । डोला भाँचिने जस्तो टुल्कीको ज्यान थियो । दुलाहको घरमा भित्रिएको भोलिपल्ट उनले राम्चे गाउँ जाने बाटो सोधिन् ।उनीले भनिन्- म आजै मेरो प्रेमी कृण्ण आलेको घरमा जान्छु । सुस्केरी हुन अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।… पुरा पढौ
बाल कथा सङ्ग्रह लिएर आइन् सरु
साहित्यकार सरस्वती श्रेष्ठ सरुको बाल कथा सङ्ग्रह किट्टी सर्वाजनिक भएको छ । पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति सरुभक्तले कृति लोकर्पण गरे । सरुभक्तले बालकथा लेखन सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै कस्तो साहित्यलाई बालसाहित्य भन्ने प्रष्ट नहुँदा अन्योल जारी रहेको बताए । समीक्षक जीवनसागर भन्डारीले सरूका बालकथा कल्पना गरिएर लेखिएको नभई प्रत्यक्ष अनुभवमा आधारित भएको विचार राखे । बालबालिकालाई प्रेरणा दिने र व्यवाहरिक… पुरा पढौ
नलाउने माया लाँए त्यसैले त रूँदै छु म आँखाबाट आँशु झारी साउन, भदौ हुँदै छु म बाँधिए नि सपनिमा तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा यथार्थमा एक्लो हुँदा आँशुले मुख धुँदै छु म जिन्दगी नै त्यागी दिउँ जस्तो लाग्छ आज भोलि मात्र तिम्रो मुख हेर्ने चाहनामा जिउँदै छु म तिमीलाई खै के हुन्छ, यता यादले सताउँदा रात दिन आँखाबाट आँशु बनी चुहुदै छु म फर्कि आउँछु भनी गयौ अन्तै माया लगाएछौँ घात रुपि… पुरा पढौ
जाडोको लुगा ( लघुकथा )
पोहोर सालको जाडोमा दमले झण्डै खतम पारेको ! यसपालि त एउटा न्यानो ज्याकेट किन्नुपर्यो....। रिठ्ठेले पटुकाको फेरोमा बाधेको पैसा छाम्दै -छाम्दै बजारतिर लाग्यो । ....यसको मूल्य अठार हजार , यसको बाह्र हजार , यो पातलोचाहिँको आठ हजार , यो स्वीटरको चार हजार....। रिठ्ठेले दुइपटक बजार परिक्रमा गर्यो र सरासर छेवैको भट्टीमा पस्यो । ....यो तरल ज्याकेटको साठी रुपियाँ, यो तरल स्वीटरको बीस रुपियाँ यो तरल गलबन्दीको दश रुपियाँ.....। उसले पटुकाको… पुरा पढौ
भूपि पुरस्कार थकाली सेवा समिति र सम्मान मोहनलाई
धौलागिरि साहित्य प्रतिष्ठान बागलुङद्वारा स्थापित यस वर्षको भूपि पुरस्कार थकाली सेवा समिति बुटवललाई प्रदान गरिने भएको छ । यसैगरी भूपि सम्मानद्वारा साहित्यकार मोहन चापागाईंलाई सम्मनित गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । भूपि पुरस्कारको राशि रु १५ हजार रहेको छ । ८५ औँ भूपि जयन्तीको अवसरमा आगामी पुस १२ गते ती पुरस्कार र सम्मान समर्पण गरिनेछ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजी रोशनले समितिले भूपिको स्मृतिमा प्रवेशद्वार,शालिक,पुस्तकालय निर्माण तथा अक्षयकोष स्थापनालगायतका काम भएको जानकारी… पुरा पढौ
कहाँ पञ्चम वर्ण, कहाँ शिरबिन्दु लेख्ने ?
1. आत्तुरी मा लेख्न पर्दा वा संयुक्ताक्षर काे जटिलता घटाएर लिपि लाई सरल र सुन्दर तुल्याउनु पर्दा पञ्चम वर्ण का सट्टा शिरबिन्दु काे प्रयाेग गर्नु पनि उपयाेगी हुन्छ । जस्तै शंकर, शंखधर, संघीयता, पंचामृत, मंजन, गीतगुंजन, कंटकारि, मुखमंडल, विचारमंथन, दंतबजान, मंथरगति, शिवमंदिर, संज्ञा, संक्षेप, जनसंपर्क, शंभुनाथ आदि ।2. एसरी शिरबिन्दु काे प्रयाेग भएका शब्द लाई अशुद्ध भनेर हेला गर्नु उचित हाेइन । काेशकार ले एस्ता शब्द लाई अनिवार्य… पुरा पढौ
‘साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महोत्सव’
आईएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको आठौं संस्करण यही शुक्रबारदेखि पोखरामा हुने भएको छ । आयोजक बुकवर्म फाउन्डेसन र र्यान्डम रिडर्स सोसाइटीले सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत फेस्टिबल मंसिर २७–३० गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी दिएको हो । फेस्टिवलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजक संस्था बुकवर्म फाउन्डेसनका निर्देशक अजीत बरालले फेस्टिबलका अघिल्ला संस्करणभन्दा यस पटक नयाँ वक्तालाई उभ्याइने जानकारी दिए । उनल भने, ‘सुरुका संस्करणमा एउटै अनुहार दोहोरियो भन्ने धेरै… पुरा पढौ